အရိုးကင်ဆာ – Shwehealth.com
အရိုးကင်ဆာသည် အရိုးအတွင်းထိန်းချုပ်၍မရသော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ကင်ဆာဖြစ်ပွား ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အရိုးကင်ဆာသည် အဖြစ်များသောရောဂါမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည့် အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ်များ၊ ဆီးကြိတ်၊ သိုင်းရွိုက်၊ ရင် သားစသည်တို့တွင် ဖြစ်ပွားသောကင်ဆာ၏ ပြန့်ပွားခြင်းကြောင့် အရိုးတွင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်။ အရိုးတွင်စတင်ဖြစ်ပေါ်သော ကင်ဆာကို ပထမအရိုးကင်ဆာဟုခေါ်ပြီး ယင်းမှာ အလွန်ရှားပါးပါ သည်။ ယင်းသည် အရိုးဖြစ်ပေါ်သောတစ်သျှူးများဖွံ့ဖြိုးလေ့ရှိသော ကလေးများနှင့် အရွယ်ရောက် စသူများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အရိုးကင်ဆာများသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ပထမအရိုးကင်ဆာကို အရိုးမြင်းဆိုးဟုခေါ်ပြီး အရိုးများသို့ပြန့်ပွားလာ သောကင်ဆာများကို ဒုတိယအရိုးကင်ဆာများဟု ခေါ်သည်။
အရိုးကင်ဆာသည် အရိုးရှည်များဖြစ်ကြသည့် လက်နှင့်ခြေထောက်အရိုးများတွင် အများ ဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အရိုးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု၏ အဓိကအကြောင်းမှာ အရိုးဆဲလ်များ၏ ဒီအန် အေတွင် မှားယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး ထိန်း၍မရတော့ဘဲ အစိုင်အခဲတစ်ခုသို့မဟုတ် ကင်ဆာတစ်ခု အဖြစ် ပွားများလာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အရိုးကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေသော အရာကိုထင်ရှားစွာ ပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ကင်ဆာအားလုံး၏ ၈%ခန့်မှာ အရိုးကင်ဆာဖြစ်သည်။ ယင်းအရိုးကင်ဆာ များအနက် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပထမကင်ဆာများဖြစ်ကြသည်။
အရိုးကင်ဆာအမျိုးအစားမှာ အဓိကအားဖြင့် သုံးမျိုးရှိသည်။
၁. အရိုးမြင်းဆိုး – အရိုးမြင်းဆိုးသို့မဟုတ် ပထမအရိုးကင်ဆာသည် အရိုးဆဲလ်များအတွင်းတွေ့ ရသော အရိုးကင်ဆာများအနက် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။
၂. အရိုးနုမြင်းဆိုး – အရိုးနုဆဲလ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သောကင်ဆာများကို အရိုးနုမြင်းဆိုးဟုခေါ် သည်။ ယင်းတို့အား အသက်ကြီးသူများနှင့် သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်လူများ၏ တင်ပါးဆုံပိုင်း၊ ခြေ ထောက်များနှင့် လက်မောင်းများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
၃. ယူဝင်မြင်းဆိုး – ယူဝင်မြင်းဆိုးသည် အရိုး၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအတွင်းရှိ မရင့်သန်သေးသော အာရုံ ကြောတစ်သျှူးများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ယင်းတို့အား ကလေးများနှင့် ငယ်သေးသောအရွယ် ရောက်ပြီးသူများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
အရိုးကင်ဆာရှိနေကြောင်းပြသည့် လက္ခဏာများမှာ –
၁. အရိုးများအတွင်းမှ နာကျင်ခြင်း
၂. ကင်ဆာရှိသောနေရာတ၀ိုက်တွင် နာခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း
၃. အရိုးများအားနည်းပြီး မကြာခဏကျိုးတတ်ခြင်း
၅. ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန် အားထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
၇. အရိုးများတ၀ိုက်တွင် နာကျင်မှုမရှိသော အခဲဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
အကယ်၍သင့်အနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါမည်သည့်လက္ခဏာကိုမဆိုတွေ့ရခြင်း၊ အ ကြောင်းမဲ့ အရိုးကျိုးခြင်းတို့အား တွေ့ရပါက ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကူအညီယူသင့်ပါသည်။ ဆရာ ၀န်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်သည့်အခါ သင့်အား သက်ဆိုင်သည့်နေရာအတွက် အရိုးစကင်ဖတ်ခြင်းများ၊ စီတီစကင်ဖတ်ခြင်းများ၊ အမ်အာအိုင်ရိုက်ခြင်း၊ ပိုစီထရွမ်အီမစ်ရှင်းတိုမိုဂရပ်ဖီ (PET) နှင့် ဓာတ်မှန် ရိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ကင်ဆာကြိတ်တွေ့ရှိရပါက ဆရာဝန်မှ ကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန် ကင် ဆာကြိတ်တစ်သျှူး၏အသားစအား ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရိုးကင်ဆာမှာ အဆင့် ၁ မှ ၄ အထိရှိ နိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၁ သည် အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသော အဆင့်နိမ့်ကင်ဆာဖြစ်ပါ သည်။
အဆင့် ၂ သည် အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသော အဆင့်မြင့်ကင်ဆာဖြစ်ပါ သည်။
အဆင့် ၃ သည် အရိုးတစ်ခုထဲတွင် နှစ်နေရာထက်ပို၍ရှိနေသော ကင်ဆာများဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ၄ သည် တိုးပွားပျံ့နှံ့မှုရှိနေသော အရိုးကင်ဆာဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန်မှ ဦးတည်နေသောကင်ဆာအဆင့်ကို သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ကုသမှုအားစတင် မည် ဖြစ်ပါသည်။
အရိုးကင်ဆာလူနာတစ်ဦးအားပေးသော ကုသမှုသည် ကင်ဆာ၏အဆင့်နှင့် လူနာ၏အ လုံးစုံကျန်းမာရေးအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ထို့အတူ ကင်ဆာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကုသမှုအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။ အရိုးကင်ဆာလူနာများအားပေးသော ကုသမှုများမှာ –
ခွဲစိတ်ခြင်း – အရိုးကင်ဆာလူနာများအတွက် ခွဲစိတ်ခြင်းသည် အရိုးများမှ ကင်ဆာတစ်ခု လုံးအား ထုတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အရိုးမှကင်ဆာအား ကျန်းမာသောတစ် သျှူးအစိတ်အပိုင်းအချို့နှင့်တကွ ဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေမျိုး တွင် ဆုံးရှုံးသွားသောအရိုးအား ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားနေရာမှ ကျန်းမာသောအရိုးတစ်ခုဖြင့် အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ် သတ္ထုအရိုးတုဖြင့်အစားထိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အချို့အခြေအနေများတွင် ခြေလက်တစ်ချောင်းလုံးဖြတ်တောက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရတတ်ပါ သည်။ ခွဲစိတ်ခြင်းကို များသောအားဖြင့် ကင်ဆာအဆင့်တစ်နှင့်အဆင့်နှစ်တွင် ပြုလုပ်လေ့ ရှိပါသည်။
ဆေးသွင်းခြင်း – ဆေးသွင်းခြင်းတွင် ကင်ဆာဆဲလ်များကိုသတ်ရန်အတွက် ဆေးဝါးများ နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများအား အသုံးပြုပါသည်။ ဆေးများအား အကြောမှတဆင့်သွင်းလေ့ရှိပြီး ပျံ့ နှံ့မှုရှိနေပါက ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါသည်။
ဓာတ်ကင်ခြင်း – စွမ်းအင်မြင့်အလင်းတန်းနှင့် ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်တို့အား အသုံးပြု၍ ကင် ဆာဆဲလ်များအား သတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ကင်ခြင်းအား ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီ ပြုလုပ် လေ့ရှိပြီး ခြေလက်ဖြတ်တောက်ရခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရန် သို့မဟုတ် ရောဂါအဆင့်မြင့်သော လူနာများအတွက် အရိုးကင်ဆာလက္ခဏာများ သက်သာစေရန် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
အဆိုပါကုသမှုနည်းလမ်းများအား တွေ့ရှိရသောကင်ဆာအမျိုးအစားနှင့် ရောဂါအဆင့်အ ပေါ်မူတည်၍ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြပါသည်။
ပျောက်ကင်းနိုင်မှုသည်လည်း ကင်ဆာအမျိုးအစား၊ ဖြစ်ပွားသည့်နေရာနှင့် ကုသမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ၂၀၀၉ တွင် အရိုးကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးနှုန်းသည် ၆၉% ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာ တွင် ရောဂါအဆင့် ၂ တွင် ငါးနှစ်အသက်ရှင်မှုနှုန်းသည် ၄၀% ဖြစ်ပါသည်။
အရိုးကင်ဆာအားကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ယင်းအကြောင်းကို သိရှိထား ခြင်း၊ ယင်း၏အချက်ပြများနှင့်လက္ခဏာများအား သိထားခြင်းနှင့် ကျန်းမာသော လူနေမှုပုံစံတစ်ခု အား လိုက်နာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာ၍ မျှတသော အာဟာရကို စားသုံးခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။